PhoneWagon: Zvese zvaunoda kuti uite Impro Tracking NeYako Analytics | Martech Zone
Sezvo isu tichiramba tichiratidzira yakaoma yakawanda-chiteshi mishandirapamwe yevamwe vedu vatengi, zvakakosha kuti isu tinzwisise kuti nei uye nei foni iri kurira. Unogona kuwedzera zviitiko pa nhamba dzakabatanidzwa dzefoni kuongorora click-to-call manhamba, asi kazhinji izvo hazvisi mukana. Mhinduro ndeyekushandisa kufona kwekutevera uye uibatanidze pamwe neyako analytics kuti uone kuti tarisiro irikupindura sei kuburikidza nekufona.
Nzira dzakanyatsojeka ndedzekuti zvine simba kugadzira nhamba yefoni kune yega sosi iri mukati mekodhi imwechete yenzvimbo. Nenzira iyi yega yega inouya yekufona inogona kuteverwa nenzira kwayo kudzoka kumushandirapamwe sosi kana svikiro rawakazvigadzirira. Pamusoro pezvo, iwe unogona zvakare kuve nekufona kunogadzira kushanya kuGoogle Analytics kune chaiyo nzira iyo iwe yaunogona kuisa mukutendeuka kwekutevera.
Izvi zvese zvinoda kuti iwe uve nebasa senge PhoneWagon, sevhisi yakavakirwa zvakanakira vamiririri vekutengesa kubata vatengi vavo kufona.
Zvimiro zveFoniWagon Sanganisira:
Pakarepo Runhare Nhamba Setup - PhoneWagon inopa dhibhodhi inonzwisisika uye nyore kushandisa iyo chero munhu anogona kunzwisisa nekufamba nayo. Nekudzvanya bhatani, unokwanisa kutsvaga ipapo chero kodhi yenzvimbo uye wedzera nhamba yefoni. Mumasekondi asingasviki makumi matatu unogona kuwedzera nhamba yefoni, kugadzirisa iyo nhamba, uye wotanga kushandisa ipapo ipapo.
Nhamba Dzese dzeNhare - Phonewagon inopa nhamba dzenhare dzekunze munyika dzinopfuura makumi masere. Yedu dhibhodhi yakapusa inobvumidza iwe kuti utsvage nhamba yefoni nenyika uye kodhi yenzvimbo. Mumasekondi asingasviki makumi matatu unogona kumisikidza yako yepasi rose nhamba yefoni uye wotanga kuishandisa kumisangano yako.
Nhare dzeMunharaunda - Nhamba dzenhare dzenharaunda dzinoratidzwa kushandura yakakwira kupfuura isingabhadharwe manhamba emakampeni madiki ekushambadzira. Kunyangwe iwe uchida iyo yemuno nhamba yefoni mune yakanyanya kutaundi dhorobha kana ingori yenzvimbo yenzvimbo kodhi, PhoneWagon inokutendera iwe kuti uwedzere emuno manhamba efoni mune isingasvike makumi matatu masekondi.
Nhamba Dzisina Mahara - Nhamba dzenhare-dzemahara dzakanakira kushambadzira kwenyika. Ivo vanogona kupa yako kambani chitarisiko chekuve nekuvapo kwenyika uye nekupa vatengi nzira yekukufonera iwe isingabhadhari. Mune yedu dashibhodhi unogona kuwedzera nyore nhamba dzenhare-dzemahara kubva pane dzakasiyana sarudzo senge 888, 866, nevamwe. Zvinotora masekondi asingasviki makumi matatu kuwedzera nhamba yemahara uye kuigadzirisa.
Tumira Nhamba Yako Yazvino Nhamba - Iwe unoda here kushandisa yako iripo nhamba yefoni kana kufambisa iwo manhamba iwe uine mumwe wekutevera wekutevera mupi kuna PhoneWagon? Nyore. Tinogona kufambisa nhamba dzako muFoniWagon kuburikidza neyakaitwa inonzi "porting". Phonewagon inotarisira zvese zvinorema kusimudza uye ichave nenhamba dzako muFoniWagon account yako pasina nguva.
Dana Kudhinda - Kungoteedzera mafoni hakuna kukwana. Kuteerera kufona kurekodha kuchakubatsira iwe kudzidzisa vashandi vako pakugadzirisa zvavanotaura kuti vachinje mafoni akawanda ave kubhadhara vatengi. Kufona kurekodha zvakare inzira yakanaka yekudzoka uye unotora chidimbu cheruzivo iwe chaungave wakanganwa kunyora pasi panguva yekufona. PhoneWagon inoita kuti iwe utore mafoni kana chero ako manhamba efoni uye zvokusarudza kuridza meseji yekukwazisa kuti mumwe mufonere azive kuti foni irikunyorwa.
Whisper Mharidzo - Yedu zevezeve meseji inzira huru yekupa mumiririri kana mushandi ari kupindura foni imwe nzwisiso yekuti iko kufona kuri kubva. Kana ivo vakapindura kufona, iwe unogona kutamba meseji kwavari senge "kufona uku kuri kubva kune yako kadhi kadhi mushandirapamwe neiyo zororo dhiseti kupihwa". Agent iye zvino vane imwe mamiriro mukati mekufona uye vanogona kugadzirisa maitiro avanoita nemutengi zvichienderana neruzivo irworwo. Zvakafanana nekodhi yekubiridzira iyo inokubatsira iwe kuhwina.
Kwaziso Mamessage - PhoneWagon inokutendera iwe kutamba meseji yekukwazisa kune anofona pakutanga kwekufona. Iwe unogona kusarudza kurekodha yetsika yekukwazisa meseji kuburikidza neyedu nyore-kushandisa-kukwazisa meseji maturusi maturusi kana kurodha iripo meseji kubva kuMP3 faira. Kukwazisa mameseji kunogona kuunza bhizinesi rako uye kupa vatengi vako fungidziro yehunyanzvi kana iwe unogona kungoita kuti iye anofona azive kuti foni irikunyorwa.
Tsika Kufona-Kutara - Kumaka mafoni kunokubatsira kuisa mumapoka, kuronga, kana kuseta mafoni acho zvichibva pane chero maitiro auri kutsvaga kuteedzera. Tine ma-tag akange aripo senge "new lead", "isiriyo nhamba", "mutengi aripo", nezvimwewo Isu tinopawo kugona kugadzira echinyakare mataki ane tsika mavara akanangana nedashboard redu. Unogona kumhanyisa mushumo kuti uone kuti mangani mafoni (kana kuti vangani vekutanga vanodana) akagadzirwa mune yega tag.
Mhete imwechete - Lead chizvarwa ndechekukurumidza. Iyo inokurumidza iwe kupindura, kana kupindura foni, ndipo paunotungamira iwe unozoshandura kuita kubhadhara vatengi. Isu tinopa kugona kuridza mafoni mazhinji panguva imwe chete. Munhu wekutanga kupindura achabatana neanodana. Izvi zvinobatsira kudzikisa nguva dzekumirira kune inbound mafoni, kununura zvirinani mutengi ruzivo, uye inogadzira zvimwe kutengesa.
Unlimited Mushandisi Maakaundi - PhoneWagon inokutendera iwe kuwedzera vashandisi vasina muganho kuaccount yako. Isu tinopa akasiyana akasiyana mabasa evashandisi nemvumo dzakasiyana siyana kuitira kuti iwe ugone kupa login kune wese munhu uye ivo vanongokwanisa chete kuwana izvo zvavanoda kuwana.
Vatengi Maakaundi - PhoneWagon yakagadzirirwa kugadzira makambani mazhinji kana nzvimbo muaccount imwe neimwe. Izvi zvinoita kuti iwe uchengetedze data rako rakasungirirwa kune chaiyo kambani kana nzvimbo sezvaunoita iwe muGoogle Ads. Vemakambani ekushambadzira vanogona kuwedzera vese vatengi vavo uye nekupa Login kune wega mutengi iyo inongogona chete kuwana yavo pachavo ruzivo.
Email Pfupiso - Iwe unoda here kugamuchira email ine rese data nezve yako mafoni usingatore kupinda kune yako dashboard? PhoneWagon inopa email pfupiso zuva nezuva, vhiki nevhiki, kana pamwedzi. Iwe unogona kugadzirisa aya maemail uye kunyangwe iwo kuti auye kubva kunharaunda yako. Izvi zvinobvumidza vamiririri vekutengesa kuti varambe vachinyatso kuenderana pavanenge vachitaurirana nevatengi.
Email Kufona Nyevero - Email kufona machenjedzo kana maemail notisi anotendera iwe kuti utumire wega email chero nguva paine kufona nyowani kubva kune chero mushandirapamwe kana iwe unogona kuiseta kuti ingotumira chete kune chaiwo matanho. Iwe unokwanisa kugadzirisa aya maemail kuti utumire kubva kune yako domeini (kureva "notices@yourdomain.com") kuti urambe wakashambadza mabhendi kana uchitaurirana nevatengi vako.
Yepamberi Kuzivisa - Nyore kuwana mitezo yakasimba zvichienderana nefoni yako data. Ona ruzivo rwunonzwisisika senge mishandirapamwe iri kutyaira mafoni anoshandura kuva anobhadhara vatengi kana kuti mangani mafoni anobva kune vekutanga nguva vanofona uye akakura kupfuura masekondi makumi mapfumbamwe. Shandisa iri data kuita sarudzo dzakasarudzika neshandiso yekushandisa uye / kana kudzidzisa vatengi vako kuti vangaita sei basa riri nani rekushandura mafoni kuva vatengi vanobhadhara.
Nhamba Dzesimba Dzenhare -Dynamic nhamba dzenhare dzinokugonesa kuteedzera kushandurwa kwekufona nenzira imwecheteyo yaunoteedzera kutendeuka kwewebhu fomu Isu tinokupa iwe mutsetse mumwe wekodhi yekuwedzera kune webhusaiti kana peji rekumhara uye isu tinoita zvimwe zvese. Mafoni anoteedzerwa kumusangano wevashanyi uye iwe unowana data pamusoro pekuti mushanyi akabva kupi, kushambadza kwavadzvanya pairi, peji rekumhara ravanomhara pariri, uye nezvimwe zvakawanda. Gadzira nhamba ine simba mu dashboard yako mumasekondi asingasviki makumi matatu uye wotanga kuteedzera shanduko yekufona kuti uwane mufananidzo uzere wezviri kuitika nemishandirapamwe yako ekushambadzira.
Mushanyi uye Keyword-Chikamu Kuchengeta - Isu tinopa mushanyi uye kiyi-nhanho yekutevera tichishandisa edu akasimba manhamba. Sezvo mushanyi mumwe nemumwe achiratidzwa nhamba yakasarudzika, tinoziva kana mushanyi iyeye achidana iyo yakasarudzika nhamba yakataridzirwa kwavari uye nekudaro tinokwanisa kuti vafone yavo kuchikamu chavo. Izvi zvinotipa zvisingaite granular dhata senge iro kiyi ravakatsvaga uye neboka rekushambadza ravakabva.
Google Analytics Kubatanidzwa - Phonewagon inopa kubatanidzwa kwakananga kwekambani imwe neimwe muAccountWagon account yako neGoogle Analytics. Unogona kusundira mafoni ako ese kuGoogle Analytics sezviitiko kuti ugone kunyatso kuona zviri kuitika uye kuti ingani shanduko dzauri kutyaira, kunyangwe kubva kune izvi zviitiko zvepamhepo.
Google Adwords Kubatanidzwa - PhoneWagon inosangana zvakananga neGoogle Ads (yaimbova Google Adwords). Nekudzvanya kamwe chete, unogona kubatanidza kambani yega yega muakaunti yako yeWhatsAppWagon neakaunti yako yeMCC Google Ads, sarudza iyo sub-account, uye ipapo ipapo tinogadzira shanduko nyowani inonzi PhoneCalls iyo inosundira shanduko kuGoogle Ads kune ese mafoni kubva kune ako akasimba nhamba mukambani iyoyo.
Automated Meseji Meseji - Gadzira meseji meseji yekupindura yekufona mafoni uye zvimwe zviitiko. Izvi zvinobatsira kuti ubatanidze vatengi munzira yavo yavanoda yekutaurirana, kutumira mameseji, uye kuvadzivirira kusheedza mukwikwidzi kana ukasapindura foni yako.
PhoneWagon yakawanikwa ne CallRail, mumwe mutungamiri mukufona anoteedzera analytics.
Tanga Yako Yemahara Muedzo neFoniWagon
Kuzivisa: Isu tinoda PhoneWagon zvakanyanya zvekuti isu tave iye Mumiriri wavo!
Tags: boka rekushambadzirakufona kwekuteverakufona yekutsvaga analyticsgoogle adsgoogle adwordsgoogle analyticshubspotfoni yekuteverarunhare
Kuchengetwa Kwevatengi: Statistics, Strategies, uye Kuverenga (CRR vs DRR)